Toriteny Alahady faha 11 Febroary 2018 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Toriteny Alahady faha 11 Febroary 2018
« Sitrana ny boka »
Ry havana, tamin’ny heriny isika dia nandinika ny fiainan’ny Joba, sy i Jesoa Kristy nampianatra ny olona sy nanala demony. Androany kosa dia miditra lalindalina kokoa isika amin’nny fandinihana ny Tenin’Andriamanitra. Ilay tenin’i Jesoa hoe : « Mety aho, madiova ianao» nefa tsy nikasika ilay boka akory izy, dia mampatsiaro antsika ny naharian’Andriamanitra an’izao tontolo izao hoe « Misia ny mazava », « Misia ny tany »… Midika izany fa mahery ny Tenin’Andriamanitra ary manova fo ka na miteny fotsiny aza Izy dia mahefa ny zavatra rehetra. Toy izany ihany koa isika rehefa mikonfesy, noho ny fahefana izay nomena ny Pretra ka hilazany hoe « izaho manala ny fahotanao… » dia afaka ny fahotantsika.
Voalohany ary araka ny ao amin’ny Boky Levitika. (Ny boky Levitika moa dia mikasika indrindra ny Mpisorona sy ny olona afaka manatrika sorona ary ny lalàna amin’ny fanatrehana ny sorona. Ny sorona lazaina eto moa dia tsy inona fa ny Sorona Masina izay ataontsika ankehitriny.) Tamin’izany moa raha misy olona boka dia monina mitokana sy mihataka ny fiarahamonina sao mamindra, ka ny boka izany dia sady manava-tena no avahan’ny fiarahamonina. Raha ho an’ny fiainam-panahintsika ary izany, ny habokana mamindra dia ny fahazaran-dratsy (ohatra : tsy mivavaka alahady) Ary manava-tena isika satria i Jesoa dia miantso antsika mba hanantona azy fa isika no manava-tena tsy mandroso satria bokan’ny fahotana. Ka izany no andinihantsika tena satria indraindray isika efa ahiliky ny olona no mbola manava-tena ihany koa.
Misy anatra lehibe telo kosa ny nambaran’i Md Paoly ho an’ny Kôrintianina teo :
Ø Atao ho voninahitr’Andriamanitra daholo izay atao rehetra satria rehefa tsy atao amin’ny anarany dia midika fa ratsy ;
Ø Aza manafintohina na iza na iza, ary aza manafintohina ny Fiangoanana/Eglizy (oh : mahatonga ny hafa tsy hivavaka intsony) ;
Ø Aza mitady ny tombontsoa ho an’ny tena manokana fa ny ho an’ny besinimaro
Ny ao amin’ny Evanjely nosoratan’i Md Marka indray dia nahafinaritra ny fihestik’ilay boka satria na teo aza ny fanilikilihan’ny olona azy, na teo aza ny fahatsapa-tenany fa tsy mendrika hifampikasoka amin’ny olona izy, dia izay indrindra no nanosika azy hieritreritra hoe ho afaka amin’izao habokako izao aho satria manana finoana.
Ø Ny dingana voalohany nataony dia ny fandinihan-tena : ny fahafantarany ny tenany hoe boka izy ; ka izay no voalohany amin’ny lalam-pibebahana. Rehefa tsy fantatrao ny tenanao hoe izaho ity kay ka ao anaty fahotana sy lavitra an’Andriamanitra dia izay ianao no tsy afaka mibebaka intsony ;
Ø manaraka izany, rehefa nino an’i Jesoa ity lehilahy boka ity dia nanantona fa tsy nijanona fotsiny tamin’ny fanilihan’ny hafa izay ; ary nandohalika teo anatrehany (ny fandohalihana sy ny fiankohofana no fanajana an’Andriamanitra ambony indrindra ao amin’ny Soratra Masina izay midika hoe : mahefa ny zavatra rehetra Ianao ry Jesoa ka mifona, mangataka ny famindram-ponao, sitrano re aho) ;
Ø avy eo izy dia nanao vavaka feno finoana : « Meteza Ianao hanasitrana ahy. »
Ny fihetsik’i Jesoa manoloana izany dia tena feno fitiavana : nangoraka azy Jesoa satria olona nahilikiliky ny olona ity boka ity hoe be fahotana nefa nanantona azy, ary indrindra indrindra satria izy natoky an’i Jesoa ; ka izany fo mangoraka izany ihany koa no angorahan’Andriamanitra antsika zanany.
Ka tokony hanana an’izay toe-po tsy manilikilika na iza na iza izay koa isika satria isika Kristianina, manara-dia an’i Jesoa, fa mandray ny olona rehetra.